साढे दुई वर्षअघिकै अवस्थामा झर्‍यो नेप्से ! - सिधा मिडिया
साढे दुई वर्षअघिकै अवस्थामा झर्‍यो नेप्से !
६ असार २०७९, सोमबार १७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । तीव्र गतिमा ओर्लिएको सेयर बजारले सोमबार अघिल्लो बुलको उच्चतम विन्दुलाई परीक्षण गरेको छ। दोहोरो अंकले घट्दा परिसूचक १८८४.८१ को विन्दुमा बन्द हुन पुगेको हो । पछिल्लो बुलिस मुभमा सेयर बजारले १८८८ सम्मको यात्रा तय गरेको थियो।